Akka PDF tti Aleergi - LibreOffice Help
Akka PDF tti Aleergi
Faayilii ammee gara Dhangii Galmee Harkeetti(PDF) olkaa'a. Faayilii PDF hujeeffannoo kamuurratti dhanga'ina xabboo hin cabneen mul'achuu fi maxxanfamuu danda'a, akkas yoo ta'e mosaajiin deeggaasraa ni ijaarama.
Faayilii - Alergi akka PDFtti.
1.2.1 Cafaqoo dhaba xiqqaa
1.2.2 Cafaqoo JPEG
1.2.4 Rukkaa calaqqee xinneessi
1.3.4 Toorbarruulee aleerguu
1.3.6 Unkaa PDF uumi
1.3.7 Dhangii dabarsi
1.3.9 Fuulawwan bakka duuwwaa saagaman ofumaan aleergii
2 Mul'annoo Qubduraa
2.1.1 Fuula qofa
2.1.2 Toorbarruulee fi fuula
2.1.3 Qeensawwan abgudduu fi fuulaa
2.1.4 Fuula irratti bani
2.2.2 Foddaatti gala
2.2.3 Bal'ina simsiisi
2.2.4 Mul'ata simsiisi
2.2.5 Qabata guddisi
2.3 Teessuma fuulaa
2.3.2 Fuula baaqqee
2.3.4 Durduuba fufaa
2.3.5 Fuulli jalqabaa bitaadha
3 Walquunnamaa Fayyadamaa
3.1 Dirqaalee foddaa
3.1.1 Fuula qubduraatti foddaa hagamtaa jijjiiri
3.1.2 Foddaa argii irratti handhuureessi
3.1.3 Haalata argii guutuun bani
3.1.4 Mataduree galmee agarsiisi
3.2 Dirqaalee walquunnama fayyadamaa
3.2.1 Kabala baafataa dhoksi
3.2.2 Kamshaa dhoksi
3.2.3 To'annoo foddaa dhoksi
3.3.1 Galteewwan cehuumsaa fayyadami
3.4.1 Sadarkaawwan toorbarruu maraa
3.4.2 Sadarkaalee toorbarruu mul'atoo
4.1 Toorbarruuwwan akka ga'umsa maqaa mogga'eetti alergii
4.2 Wabiiwwan galmee gara galteewwan PDFtti jijjiiri
4.3 URLoota sirna faayiliitti firooman aleergi
4.4 Geessitoota galmee-qaxxaamuraa
4.4.1 Akkayyaa durtii
4.4.2 Fayyadama PDF dubbisaa waliin bani
4.4.3 Iyyaafataa Intarneetii waliin bani
5.1 Furtuu olkaa'i
5.2.1 Hin haayyamne
5.2.2 Qulqullina gadaanaa (150 dpi)
5.2.3 Qulqullina olaanaa
5.3.1 Hin haayyamne
5.3.2 Fuulawwan saaguu, haquu fi naanneessuu
5.3.3 Dirreewwan unkaa keessatti guutuu
5.3.4 Dirreewwan unkaa keessatti guutuu, yaada kennuu
5.3.5 Fuulawwan baasuun alatti hunduma
5.4 Garagalchuu qabeentaa dandeessisi
5.5 Gaheenya meeshaaleetiif gahiinsa barruu dandeessisa
6 mallatttoowwan Lakqurxaawaa
Fuulawwan faayilii PDF keessatti hammatamaniif dirqaalee aleergii qindeessa.
Hanga maxxansa hiikame mara aleerga. Yoo hangi maxxanfaman hiikame, galmee hundaa aleerga.
Hanga fuulawwanii aleerguuf, dhangii 3-6 fayyadami. Fuulawwan baaqqee aleerguuf, dhangii 7;9;11 fayyadami. Yoo barbaadde, waliin makiinsa hangawwan fuulaa fi fuulawwan baaqqee, dhangii kanneen 3-6;8;10;12 fayyadamuun aleerguu dandeessa.
Filannoo ammaa alerga.
Dirqaalee aleergii PDF calaqqeewwan galmee kee keessaaf qindeessi.
Calaqqeewwan EPS durargiiwwan ida'ame waliin akka durargiiwwaniitti qofa aleergamu. Calaqqeewwan durargiiwwan ida'ameen alaa akka iddoo qaawwan duuwwatti aleergamu.
Cafaqoo dhaba xiqqaa
Cafaqoo dhaba xiqqaa calaqqeewwanii fila. Pikseeloonni marri eegamaniiru.
Cafaqoo calaqqeewwan JPEG fila. Sadarkaa qulqullina olaanaan, irra jireessi pikseeloota maraa eegamaniiru. Sadarkaa qulqullina gadi aanaan pikseeloonni muraasni ni dhabu, meeshaan hojii harkaa walbaru, garuu hagamtaan faayilii ni hir'ata.
Cafaqoo JPEG tiif sadarkaa qulquulinaa galchi.
Rukkaa calaqqee xinneessi
Calaqqeewwan irra deebi'uun fakkeessuu ykn hir'isuu lakkofsa xiqqaa pikseeloota safartuu dheerinaan fila.
Qulqullina galtee calaqqeewwaniif fili.
Gara dhangii PDF/A-1a tti jijjiira. Kun akka dhangii faayilii galmee elektiroonikiitti yeroo dheeraaf akka kaa'amuu danda'utti qindeessama. Bocquuwwan hundi galmee maddaa keessatti fayyadan gara faayilii PDF uumameetti idaatamu. Iyyaatootni PDF ni barreefamu.
Muraawwan PDF barreessuuf fila. Kun ammoo hammantaa faayilii hanga guddaadhaa guddisuu/dabaluu danda'a.
Iyyanni PDF odeeffannoo waa'ee caasaa qabeentota galmee qabata. Kunis galmee mi'oota argiilee adda addaarrati agarsiiftu kan si gargaaruu fi yeroo mosaajii dubbisaa argii fayyadamtu.
Toorbarruulee galmeewwan Barreessa akka toorbarruulee PDFtti aleerguuf fila. Toorbarruuleen keeyyatoota toorii maraaf(Meeshaalee - Toorii lakkoofsaa kennuu) fi galfata qabeentaa maraaf kan galmee maddaa keessatti geessituu ramaddeef uumamanii dha.
Yaadannoowwan Barreessaa fi galmeewwan Calc akka yaadannoowwan PDFtti aleerguuf fila.
Unkaa PDF uumi
Unkaa PDF uumuuf fili. Kuni fayyadamaa galmee PDFtiin kan guutamee fi maxxanfamuu danda'uu dha.
Dhangii dabarsuu dhangiiwwan faayilii PDF waliin irraa fili.
Dhangii deetaa ati galchiituu irraa fudhatu filadhu: FDF (Unkeessa Dhangii Deetaa), PDF, HTML, or XML.
Qindaa'inni kun amala URL too'annoo galmee keessa faccisa.
Fuulawwan bakka duuwwaa saagaman ofumaan aleergii
Faayilii kan qabeentaota fuulaa qofa mul'isu burqisiisuuf fili.
Toorbarruulee fi fuula
Faayilii PDF dhaaba dibdoo fakkii toorbarruulee fi qabeentota fuulaa mul'isu burqisiisuuf fili.
Qeensawwan abgudduu fi fuulaa
Faayilii PDF dhaaba dibdoo fakkii qeensawwanii fi qabeentota fuulaa mul'isu burqisiisuuf fili.
Fuula irratti bani
Fuula kenname yeroo dubbisaan faayilii PDF banu mul'isuuf fili.
Faayilii PDF qabeentota fuulaa guddisuun ala mul'isuuf burqisiisuuf fili. Yoo mosaajii dubbisaa durtiidhaan qabata guddisi fayyadamuun qindaa'erraa, fuulichi qabata guddisi waliin mul'isa.
Faayilii PDF fuula guddate foddaa dubbisaa keessatti hundumatti gale mul'isu burqisiisuu fili.
Faayilii PDF fuula guddatee foddaa dubbisaa bal'ina simsiisuu mul'isu burqisiisuuf fili.
Faayilii PDF saxaatoowwanii fi barruu fuula guddate irratti bal'inaan walsimuu foddaa dubbisaa mul'isuuf burqisiisuun fili.
Qabata guddisii kenname yeroo dubbisaan faayilii PDF banu fili.
Faayilii PDF fuulawwan akkaataa qindaa'ina teessuma mosaajjii dubbisaatti mul'isu burqisiisuuf fili.
Faayilii PDF fuula tokko yeroof mul'isuu burqisiisuuf fili.
Faayilii PDF fuula tarjaa sarjaa fufaadhaan mul'isu.
Faayilii PDF fuula tarjaa fufaa cinaa cinaadhaan mul'isu burqisiisuuf fili. Fuula waan lamaa oliif, fuulli jalqabaa mirga irratti agarsiifameera.
Fuulli jalqabaa bitaadha
Faayilii PDF fuulawwan cinaa cinaadhaan tarjaa fufaa keessatti mul'isu burqisiisuuf fili. Fuulawwan lamaa oliif, fuulli jalqabaa bitaa irratti agarsiifameera. Teessuma barru walxaxaa Meeshaalee - Dirqaalee - Qindaa'ina afaanii - Afaanotaa irratti deeggarsa dandeessisuun si irra jira.
Fuula qubduraatti foddaa hagamtaa jijjiiri
Faayilii PDF foddaa dubbisaa argii guutuu keessatti mul'ate burqisiisuuf fili.
Foddaa argii irratti handhuureessi
Faayilii PDF argii irratti gidduu foddaa dubbisaatti mul'atu burqisiisuuf fili.
Haalata argii guutuun bani
Faayilii PDF foddaa dubbisaa argii guutuu keessatti fuuldura foddaawwan biroo maraatti mul'atu burqisiisuuf fili.
Mataduree galmee agarsiisi
Faayilii PDF mataduree galmee waliin kabala mataduree dubbisaa keessatti mul'atu burqisiisuuf fili.
Dirqaalee walquunnama fayyadamaa
Kabala baafataa dhoksi
Yeroo galmeen ka'aa ta'e kabala baafata dubbisaa dhoksuuf fili.
Yeroo galmeen ka'aa ta'e kamshaa dubbisaa dkoksuuf fili.
To'annoo foddaa dhoksi
Yeroo galmeen ka'aa ta'e to'annoo dubbisaa dhoksuuf fili.
Galteewwan cehuumsaa fayyadami
Galteewwan cehuumsa islaayidii Dinqisiiffannoo gara walduraa duuba galteewwan PDFtti aleerguuf fila.
Sadarkaawwan toorbarruu maraa
Yeroo dubbisaan faayilii PDF banu sadarkaalee toorbarruu mara mul'isuuf fili.
Sadarkaalee toorbarruu mul'atoo
Yeroo dubbisaan faayilii PDF banu sadarkaalee toorbarruu gara gadee sadarkaaa filatameetti mul'isuuf fili.
Akkaataa itti toorbarruu fi geessitoota gara galmeekeetti alergitu ifteessi.
Toorbarruuwwan akka ga'umsa maqaa mogga'eetti alergii
Toorbarruuwwan (galteewwan wabiiwwanii) faayiloota PDF keessaa akka naannoowwan roogarfeetti qindeessamu. Dabalataanis, toorbarruuwwan gara wantoota maqaa mogga'aniitti maqaa mataa isaaniitin qindeessamu danda'u. Saanduqni filannoo akka maqaalee wantootaa galmee kee keessatti akka galteewwan toorbarruutti alerguuf dandeessisa. Kun ammoo maqaatin gara wantoota kanaatti galmeewwan biroo irraa geessinuu nu dandeessisa.
Wabiiwwan galmee gara galteewwan PDFtti jijjiiri
Sanduuqa mallattoo kana URLoota faayiloota wabeeffaman ODF irraa gara faayiloota PDF tti akka maqaa wal fakkaataa waliin danddeessisa. URLoota wabeeffamaniif dheerattoonni .odt, .odp, .ods, .odg, and .odm gara dheerattoo .pdf jijjiiramu.
URLoota sirna faayiliitti firooman aleergi
Sanduuqni mallattoo kun URLoota gara galmeewwan birootti akka URLoota firoomiitti alergaman sirna faayilii keessatti dandeessisa. Gargaartuu keessatti "relative hyperlinks" ilaali.
Faayilii PDF kee irraa gara faayiloota birootti akka itti qabdu ifteessi.
Geessitoonni galmee PDF kee irraa gara galmeewwan birootti akka sirna dalagaa kee irratti ifteessameen qabama.
Fayyadama PDF dubbisaa waliin bani
Geessitoonni galmee-qaxxaamuraa fayyadma PDF dubbisaa kan amma galmee agarsiisu waliin banama. Fayyadmni PDF dubbisaa gosa faayilii ifteessame geessituu keessatti qabuun irraa eegama.
Iyyaafataa Intarneetii waliin bani
Geessitoonni galmee-qaxxaamuraa iyyaafataa Intarneetii waliin banama. Iyyaafataan Intarneetii gosa faayilii ifteessame geessituu keessatti qabuun irraa eegama.
Bakka iggitaa galchitutti qaaqa banuuf cuqaasi.
Galmee maxxansuun hin haayyamamu.
Qulqullina gadaanaa (150 dpi)
Galmichi qulqullina gadaanaa (150 dpi) keessatti qofa maxxanfamuu danda'a.
Galmeen qulqullina olaanaa keessatti qofa maxxanfamuu danda'a.
Jijjiiramni qabeentotaa hin haayyamamu.
Fuulawwan saaguu, haquu fi naanneessuu
Fuulawwan saaguu, haquu fi naanneessuu qofatu haayyamama.
Dirreewwan unkaa keessatti guutuu
Dirreewwan unkaa keessatti guutuu qofatu haayyamama.
Dirreewwan unkaa keessatti guutuu, yaada kennuu
Dirreewwan unkaa keessatti guutuu fi yaada kennuu qofau haayyamama.
Fuulawwan baasuun alatti hunduma
Fuulawwan baasuun alatti, jijjiiramoonni marri ni haayyamamu.
Garagalchuu qabeentaa dandeessisi
Garagalchuu qabeentaa gabatee muraatti dandeessisuuf fili.
Gaheenya meeshaaleetiif gahiinsa barruu dandeessisa
Gaheenya meeshaaleetiif gahiinsa barruu dandeessisuuf fili.
Faayilii ammee dhangii PDF keessatti aleerga.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Common/Export_as_PDF/om&oldid=1328900"
This page was last edited 17:09:20, 2016-06-18 by LibreOffice Help user WikiSysop.